MBS နှစ်ပတ်လည် ပျော်စရာ ဘလော့ဂါအငြိမ့် မှ မင်းသမီးချောလေး ညီမလေးမီးငယ် က ကိုရင်နော်နဲ့မခင်လေးငယ် ကို Tag လိုက်ပါတယ်တဲ့ ရေးပေးပါတဲ့..။ တစ်ခါ မီးငယ်လေး Tag ထားတာကို နောက်ထပ် မင်းသမီးချောလေး ညီမလေးDream (Dreamစိန်) လေးကလည်း ထပ်ဆင့် ထပ် Tag လိုက်ပြန်တယ်..။ ညီမလေးအိတာ ကလည်း ထပ်ဆင့်ထပ်ဆင့် Tag လိုက်ပြန်ရော..။ ကယ် မဖြစ်ချေတော့ဘူး ကျန်တာတွေ အသာထား Tag ထားတာတော့ အလေးထား ရေးလိုက်ဦးမှ ဆိုပြီး ရေးချလိုက်ပြီ.. မြင်တဲ့အတိုင်း “ရောင်စုံလျှို့ဝှက်ချက်များ” ပေါ့..။ တို့များအိမ်က တစ်ချိန်လုံး ရန်ဖြစ်နေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ဘလော့လေး ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသာနော်.. :P .. တစ်နေ့က “ကလေးလေး” တစ်ယောက်ကို သမီးလေးအဖြစ် မွေးစားလိုက်တာလည်း အားလုံးသိကြမယ်ထင်တယ်း).. အခုဆို သုံးယောက် ဖြစ်သွားပြီလေ.. ဒီတော့ Tag ထားတာကိုလည်း သုံးယောက်လုံးစာ ရေးမှဖြစ်တော့မှာပေါ့..။ မေးခွန်းလေးတွေရဲ့ အဖြေလေးတွေကို အရောင်လေးတွေခွဲပြီး ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်..။ ပြုံးတော်မူကြပါကုန်...
ကိုယ့်ကို သူငယ်ချင်းတွေကဒီလိုခေါ်တယ် …
ကိုရင်၊ ကိုနော်၊ ဦးနော်၊ ရော်နင် (ရော်နင်ဒို မဟုတ်ပါ)၊ မိနော်၊ နော်နော် (အဆိုတော်မဟုတ်ပါ).. နောက်..
ခင်လေး၊ ငယ်၊ ခလေးငယ်၊ မမခင်လေး၊ တီတီငယ်၊ တီတီခင်၊ မေမေခင်၊ နောက်ရှိသေးတယ်.. အစုတ်ပလုတ် ဆိုတာက (ဒင်း ခေါ်တာပေါ့ ဟွန်း)
ကလေးလေးဂိုရော့ ခယေးယေး၊ တယေးရေး၊ က၄၄၊ မေမေခင်ကမိချွဲလေးလို့ဖဲခေါ်ရယ်
“ဦးနော်ကတမိုး မေမေခင်ကတမိုး.. ကလေးလေးက ဘယ်မာနေရမှာလဲ..” ဒီဘလောလေး မှာဖဲနေရော့မယ်
ရွာထိပ်က တာဝါတိုင် အိပ်ချိန်းမှာ သွားပြောရတာ.. လိုင်လည်းမကောင်းဘူး.. အော်ပြောရတာ.. ဆက်ပါနဲ့နော်..
ခင်လေးဖုန်းက ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပကို အမြဲရောက်နေတာ
“ဦးနော်ပေါတာ.. ဘာမှ ကျားရဖူး..” ကလေးလေးဖုန်းက ဘက်ထလီ အားကုန်နေရယ်
... ကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးတွေက …
ဟိုဟာ.. (ဟီးး.. ဟိုဟာဆိုတာ လက်ညိုးထိုးပြတာပါဗျ) စားပွဲပေါ်က အရက်ပုလင်း
ဒီဟာ... အဟက်ဟက်.. ရေမွှေးပုလင်း
“ဦးနော်နဲ့မေမေခင် ကလဲ ဟိုဟာဒီဟာနဲ့ ဘာမန်းတိဖူး..” ကလေးလေးကရော့ နှင်းဆီ..ကာဖီ..အရုပ်..ဖန်စီပစ္စည်းမိုးစုံ
“ဟွင်း ဦးနော်နဲ့မေမေခင်ကလဲ ပြောင်းပြန်ရီး အဖူနဲ့အမဲတဲ့..” ကလေးလေးကရော့ တက်တန့်ယောင် ကြိုက်ရယ်
ကချင်လုံချည်နဲ့ ပင်နီတိုက်ပုံ (ငါကွ...)
“ဦးနော်..နော်.. ကလေးလေး ကြောက်ရယ်.. မေမေခင် ဟော့ရဖူး..” ကလေးလေးက လှတာအကုန်ကြိုက်
“ဦးနော်ကလဲ ငပိက နံရယ်လေ၊ မေမေခင်ကလဲ အောအော့တွေကြိုက်ရဖူး..” ကလေးလေးက ချက်ကျွေးတာစား၏
သန့်မှ (ဘာပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ် အသစ်မှ.. အဟောင်းဆိုမကြိုက်)
“မေမေခင် ကလေးလေးကို အလှပင်ပေးရမယ်နော်..” ကလေးလေးက အရုပ်မိုးစုံ..ဖန်စီမိုးစုံ
Yo..!!! တိမ်တိန်းတိန်းတိန် ဆို ငါလုံးဝမကြိုက်.. HipHop က မိုက်.. ခိုက်.. ငါအရမ်းကြိုက်.. ဟိုက်.. ဟိုက်.. ရေ... ရေ.. အဲ့တာ ခင်လေးငယ် မှာတမ်း.. (ဟက်ဟက်)
ကလေးလေးက မမဂျိုးဂျာ ကြိုက်ရယ်.. အလွမ်းတချင်းကြိုက်ဖူး..အငိုလွယ်လို့
များမှများ.. (ဖားပြီးရေးရင်တော့ ရိုက်ချင်တယ်.. ဟီးးး.. ဖားကိုနော်)
“အာာား မေမေခင်ကလဲ ချာရေးချရာပါချို ဂျူးက ချရာဟုတ်ဖူးရေ ချရာမကြီးကို..” ကလေးလေးကရော့ တိဖူး ပြောတတ်ဖူး..
စာအုပ်စာပေ လူ့မိတ်ဆွေတဲ့ ဘယ်စာအုပ်ဖြစ်ဖြစ် အကုန်ကြိုက်
ဗလာစာအုပ် (ရေးချင်တာရေးမယ်.. ချစ်ချင်တာချစ်မယ်.. ဖျက်ချင်တာဖျက်မယ် ဒါဟာ ကိုယ့်သမိုင်းလေ.. ဟက်ဟက်)
Life style …
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရယ်ရယ်မောမော ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် သာသာယာယာ အေးအေးဆေးဆေး
“အာာာ မေမေခင်ကလဲ ထီးကျန်ရဖူး မိုးရွာရင် ချိုတုန်မာပေါ့..” ကလေးလေးက ခုံပေါက်ပေးလွားမယ် ချော့ကဂျားမယ်
ရှူးတိုးတိုး.. လူလစ်ရင်ပြောပြမယ်.. အဲ့ဒါအဲ့ဒါ
“ဦးနော် ကလေးလေးကို ပေါပ.. မေမေခင် တုတ်ရဖူးနော်..” ကလေးလေးက အရုပ်နဲဖန်စီပစ္စည်းဝယ်တာ
“ဟဲ့.. ကိုရင် ငြိမ်းချမ်းခြင်းလက်ဆောင်တော့ ငါ့လည်းတစ်ခုပေး ငါလည်းလိုချင်တယ်..”
“ဝေး..ဟေး.. ကလေးလေးလဲယူမယ်.. ဘယ်တော့ရမှာလဲ??”
ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်ဆုံးသူက …
ကိုယ့်ရဲ့ အလေးစားဆုံးသူက …
အားငယ်နေသူကို အားပေးတတ်သောသူ.. ဒုက္ခရောက်နေသူကို ကူညီတတ်သောသူ.. စိတ်သဘောဖြူစင်သန့်ရှင်းသောသူ
ဦးနော်ပေါတာရော မေမေခင်ပေါတာရော.. နောက်.. ဘုရားသခင်(အားလုံးဖန်ချင်းတယ်ချိုလို့)
ကိုယ့်ရဲ့ အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းက …
မူးရင်ထမ်းပြီးအိမ်လိုက်ပို့တတ်တဲ့သူ ဟီးး.. သောက်ဖော်သောက်ဖက်တွေပေါ့.. “အော်..တစ်ယောက်ပဲပြောရမှာလား..” ဒါဆို.. ဒင်းပေါ့
အများကြီးပေါ့ များလွန်းလို့ ဇကာချလိုက်တာ အကောင်ကြီးကြီး အမြီးရှည်ရှည် ကိုရင်နော်စုတ် တစ်ကောင် တင်ကျန်နေတယ်
“အာာ မေမေခင်.. ဦးနော်က အမီးချေတာလာ ဟုတ်လာ..” ကလေးလေးကရော့ အခင်ဆုံးများလို့ ဒူမှန်းတိဖူး
“ဟွန်း.!! အစုတ်ပလုတ်မ ငါ့ကိုများ အကောင်တဲ့ သေအုံးမယ် @#$%^&*+!~”
ကိုယ့်ကို အများဆုံးနားလည်မှုပေးနိုင်သူက …
ရှိလောက်ဘူးထင်တယ်.. တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် နားမလည်ဘူး
ကိုယ့်ရဲ့ အမုန်းဆုံးသူက …
ဘယ်သူ့ကိုမှ မမုန်းပါ... တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော့ မုန်းလိုက်ချင်တယ် (တောက်တုန်းအကျလို့)
ပြောရခက်တယ်.. တစ်ခါတစ်လေပြောချင်တယ်.. မပြောတော့ပါဘူလေ..
မပြောပါရစေနဲ့ဗျာ.. ကျနော့်နှလုံးသား သူ့ကိုအပိုင်ပေးလိုက်ချိန်ထဲက “နှလုံးမဲ့လူ” ဖြစ်ခဲ့တာပါ ရင်မခုန်တော့ပါ.. (ဟီးးးး.. နှလုံးမဲ့ဆိုတာ အသည်းနှလုံးကို ပြောတာနော်)
မိန်းခလေး ၁၀ ယောက်ကျော်ပါသော (ကျားလုံးဝမပါ) ဓါတ်လှေခါးထဲ ဝင်လိုက်မိချိန် (ရေတိမ်နစ်မှာကြောက်လို့) “အီးးဟီးး အော်ငိုမှာနော်”
“အမယ်အမယ် နင်ကများ ကြောက်ရသေးတယ် သေနာ.. ဟွန်းး..” ခင်လေးကတော့ သဘာဝဘေးအန္တရယ်တွေကျရောက်တဲ့အချိန်
အပျော်ဆုံးအချိန်က တစ်ရက်တော့ ရောက်လာမှာပါ အခုပျော်တယ်ဆိုတာတွေက ဘာဟုတ်တာမှတ်လို့.. :P
အားရက် နားရက် ကိုကိုနဲ့လျှောက်လည်တဲ့အချိန်ပေါ့
“မေမေခင်လယ်ရဖူး လယ်ရဖူး..” ကလေးလေးက ပေါ်ရပါဖူး.. အပေါ်ဆုံးချိန်ချိုတာ မနေ့ကဖစ်မယ် မေမေခင် မွေးချားလိုက်လို့
အဲ့ဒီနေ့ကပေါ့ဗျာ.. ကျနော်လေ.. ရင်တွေအရမ်းခုန်နေခဲ့တာပေါ့.. သူ့လက်လေးကိုကိုင်းပြီး.. (အီးးးဟီးးး နောက်မှ ပိုစ့်တစ်ခုရေးမယ် :D)
များလွန်းလို့ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလို့သာ ပြောလိုက်တော့မယ်
မေမေခင်နဲ့ တူတူဖဲ များလိုမှတ်နိင်တော့ဖူး
ကမ္ဘာမြေငြိမ်းချမ်းပါစေ.. မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းပါစေ.. လူသားအားလုံးငြိမ်းချမ်းပါစေ.. ဘေးဒုက္ခများကင်းဝေးကြပါစေ..
“ဟဲ့ ကိုရင်.. အဲ့တာ နင်မှမဟုတ်ဘူး အားလုံးတောင်းနေတာ မရလို့ပေါ့ ဟဲ့” ခင်လေးကတော့ အတောင်ပေါက်ချင်တယ် ပျံသွားလိုက်ချင်လို့
ကလေးလေးက မပေ့မှန်းတိလိုတောင်းတော့ဖူး.. မေမေခင် အတောင်ပေါက်ရင် ကလေးလေး လိုက်ချီးမယ်
“ဟဲ့.. လုပ်ကြပါအုံး ခင်လေးငယ်တစ်ယောက် အတောင်ပေါက်ပြီး ယင်စိမ်းကောင်ကြီးဖြစ်သွာလို့.. ကလေးလေးပါတဲ့ အီးအီးပုံပေါ်မှာနားနေပြီ.. (ဟီးးးး.. :D)”
အချစ်ဆိုတာ..! နားမလည်ပါဘူး.. အနော်ကတော့ ကောင်မလေးတွေ ချစ်တယ်လို့လာပြောရင် စိတ်ကိုမဝင်စားဘူး ခါးခါးသီးသီး ငြင်းပစ်လိုက်တာ.. ဟီးးးး..
အချစ်ဆိုတာ “အ” လို့ “ချစ်” တာ.. “ချစ်” တော့လည်း “အ” ရတော့တာပေါ့
ကလေးလေး ပေါပတတ်ဖူး.. အချစ်=အချစ် (သီချင်းကအဲလိုပေါတာဖဲ)
ဘယ်သူ့ကိုမှ မမုန်းဖူးဘူးဗျ.. တစ်ရက်တော့ မုန်းကြည့်ဦးမှ ဘယ်လိုလဲလို့.. ဟီးး
“သူအရမ်းရက်စက်တယ် မုန်းတယ် မုန်းတယ် ရှင့်ကိုမုန်းတယ်... ဟင့်..အီးးဟီးးးးး.. (ငိုသံ)” အဲ့ဒါအဲ့ဒါ အမုန်းဆိုတာ..
“မေမေခင် နိုရဖူး..” တိချင်ရင်မုန်းကြည့်ပေါ့
ကဖေးလေဗျာ ဂျေညီညီဆိုထားတာလေ “ခုတော့ တစ်ယောက်ထဲကွယ် အလွမ်းကဖီးရဲ့ ဒေါင့်လေးမှာ..”
အလွမ်းအကြောင်းတော့ ပြောတော့ဘူး မောလို့ ပိုစ့်တွေမှာ အများကြီးရေး ပြီးပြီ.. :)
လူနာမည်လား တိဖူး ကလေးလေး တိဖူး
ခက်တယ် ဒီအကြောင်းပြောရင် ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး
သံယောဇဉ်ဆိုတာ အင်း.. ခင်လေး ဒါလည်း ပြောပြီးသားလေ..
ဘကုန်းနဲ့ ဝလုံး.. ကုန်းမကုန်းတော့ မသိဘူး လုံးတာတော့လုံးတယ် (လုံးလည်ချာလည်လိုက်နေလို့)
ဘဝ ဆိုတာ ဆေးရုံကို ပြောတာပါ မွေးတဲ့အချိန်နဲ့ သေတဲ့အချိန် ကြားကာလပေါ့
ဦးနော် ပေါတလို ဘနဲ့ဝ
ကောင်းသောသူ (သူငယ်ချင်းကောင်းကို ပိုလိုချင်လို့)
စာမေးပွဲခန်းထဲက ကျောင်းသားတစ်ယောက်လိုဘဲ (မအောင်လို့ကတော့ မုန်းလိုက်မှာ)
ပျော်ပျော်နေသေခဲ၊ နေတတ်အောင်နေမယ်.. သေတတ်အောင်သေမယ်
မွေးဖွားလာကြတယ်.. သေဆုံးလိမ့်မယ်.. ရန်လိုမုန်းတီးမှုတွေဖယ်လို့ ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြမယ်.. အားလုံးကို ပျော်စေချင်တယ်..
လူသားအားလုံးကိုလေးစားပါတယ် (ဦးကျော်စကား ခဏငှားပြောတာ)
(ကိုရင်နော်၊ ခင်လေးငယ်၊ ကလေးလေး)
အချိန် 9:18 AM
နာ့ကိုပေကုန်ပြီ.. ဟီးဟိး... :P
ကိုရင် မခင်လေး ကလေးလေး တို့ရဲ့ နှစ်သက်ဖွယ် လျို့ဝှက်ချက်များ အား ပျော်ရွှင်စွာ ဖတ်ရှူသွားပါတယ် ၊၊
ကိုရင် မခင်လေး ကလေးလေး အားလုံး မင်္ဂလာပါဗျာ ၊၊
အကြိုက်လေးတွေ တစ်မျိုးစီနဲ့ ဖတ်လို့ကောင်းတယ်း) ကလေးလေးက ဗိုက်ချာရင် ဦနှော်အရက်ပုလင်းခိုးသောက်လိုက်ပေါ့ လွယ်လွယ်လေး :P
ဒီကြားထဲ ရန်ဖြစ်တာလေးတွေ ဖြန်ဖြေတာလေးတွေနဲ့...
ဖတ်ရတာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ကို ပြုံးမိတယ်... :)
ကိုရင်နော် မခင်လေး နဲ့ ကလေးလေးတို့ ပျော်ရွှင်ပါစေနော်...
ဦးနော် မမခင်လေး ကလေးလေး တို့ရယ်
မမခင်လေး ကို မမခင်လေးလို့လည်းခေါ်သေးတယ်လေ..
ပျော်ရွှင်ပါစေနော် ...ဆုတောင်းတွေပြည့်ပါစေ..ကျေးဇူး ။:D
ိအဟေးဟေး တစ်မိသားစုလုံးတက်တာပါလား ပျော်စရာကြီး အဟီးတစ်ယောက်တစ်မျိုးသုံးယောက် သုံးမျိုးအဟိ နိပ်ဟရေးချက်မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် အခံအအုပ် အချီအချ ဂွတ်သဟ ဦးနော်ကလည်းအကြောက်ဆုံး အချိန်ရောက်ရင် တားတားကိုလှမ်းခေါ်လိုက်နော် အဟီး
ဦးနော်ကြောက်နေမှာစိုးလို့ အားနွဲ့တဲ့ယောကျာ်ချင်းဆိုတော့လေ ကိုယ်ချင်းစာတယ် အဟတ်ဟတ် ဒီမိသားစု ထာဝရပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ
ံHome Sweet Home ပါပဲ
ဖတ်ရတာ ကြည်နူးစရာလေး :)
အဟား .. တော်တော်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အိမ်လေးပဲ ။ ညံနေတာပဲ ရန်ဖြစ်တဲ့ အသံလေးတွေနဲ့ :P ကိုနော်ကြီး ဝါတနာပါတာ မသိရသေးဘူးနော် အဟား ပြီးရင် တိုးတိုးလေးပြောပြ ။ တိုင်ပင်ဖော်ရအောင် ။ မခင်လေးငယ် လည်း အလို့ ချစ်တာ၊ ချစ်တော့လည်း အတဲ့သူမဖြစ်ပဲ အတာလေးကို ချစ်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ။ တမီးလေး အတွက်တော့ ကစားစရာ အရုပ်တွေ အများကြီး နဲ့ တွတ်ပီ စာအုပ်တွေ အများကြီး ရပါစေဗျာ
မေးခွန်းတစ်ခု .... အဖြေမှန် သုံးမျိုး ...
အကြိုက်ဆုံးကတော့ ... အတောင်ပေါက်ပြီး ယင်ကောင်ဖြစ်သွားတာ .... :D
မိုက်တယ်ဗျာ... အသက်နဲ့ sex မတူတဲ့သူတွေရဲ့ မတူတဲ့အတွေးတွေကို ဖတ်ရတာ...
ကိုနော်ရယ်၊ ခင်လေးရယ်၊ ကလေးလေးရယ် သုံးယောက်ပေါင်း အတွေးလေးတွေက အရမ်းကို ကောင်းတာပဲနော်။ :)
အန်တီခင်လေး အတွက် ရေမွှေးတစ်ပုလင်း